Ndị nkwusa na-ekwe ka Adtech gbue uru ha | Martech Zone
Weebụ bụ ihe kachasị dị egwu ma na-echepụta adị. Yabụ n'ihe banyere mgbasa ozi dijitalụ, okike ekwesighi ịkọwapụta. Onye mbipụta akwụkwọ kwesịrị, na tiori, inwe ikeiche ọdịiche dị iche na ngwa mgbasa ozi ya site na ndị na - ebi akwụkwọ ndị ọzọ iji wee merie ire ahịa ma nyefee ndị mmekọ ya mmetụta na arụmọrụ na-enweghị atụ. Mana ha anaghị eme ya n’ihi na ha lekwasịrị anya n’ihe mgbasa ozi mgbasa ozi kwuru na ndị mgbasa ozi kwesịrị ime, ọ bụghị n’ihe ha nwere ike ime.
Tụlee ihe dị mfe dịka ọkwa mgbasa ozi mara mma nke kpochapụla. Kedu ka ị ga - esi were ike nke akwụkwọ mgbasa ozi zuru oke, na-egbukepụ egbukepụ ma weta otu ahụmịhe ahụ iji gosipụta mgbasa ozi? O nwere ike ịbụ na ọ bụghị ọtụtụ ụzọ iji mee nke ahụ n'ime nanị IAB ọkọlọtọ ad nkeji, ọmụmaatụ.
Ad tech agbanweela ịzụ ahịa na ire ahịa n'ime afọ iri gara aga. Nyiwe Programmatic mere ka ahịa dijitalụ n'ọtụtụ dị mfe karịa mgbe ọ bụla. Nke ahụ nwere nsogbu ya, ọkachasị maka ụlọ ọrụ na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi. Mana n'ime usoro a, ọ belatara ọtụtụ ọrụ okike na mmetụta nke mkpọsa mgbasa ozi na akụkọ ihe mere eme ama. I nwere ike na-adaba nnọọ ukwuu mbọn ike n'ime a ọkara rektangulu ma ọ bụ a leaderboard.
Iji nyefee mkpọsa dijitalụ n'ọtụtụ, mgbasa ozi mgbasa ozi na-adabere na ihe abụọ dị oke egwu: ịhazi na nnweta. Ha abụọ na - egbochi arụmọrụ na okike nke mgbasa ozi dijitalụ. Site na ịmanye ụkpụrụ dị mma na nha okike na isi ihe ndị ọzọ, mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ka mkpọsa dijitalụ na-emepe emepe na ntanetị. Nke a na-ewebata ngwa ahịa nke ngwa ahịa ngosi. Si a ika si ele, niile yiri nkata bụ ihe ma ọ bụ na-erughị myirịta, na-amụba ọkọnọ na-akwọ ụgbọala nkwusa ụtụ ala ala.
Ihe mgbochi dị ala ịbanye na ebe mbipụta dijitalụ emeela ka mgbawa nke ngwongwo dijitalụ gbawara, na-eme ka o siere ọbụna ụdị ike ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ndị na-ebipụta akwụkwọ. Mpaghara ozi ọma mpaghara, saịtị B2B, saịtị ntanetị, na ọbụlagodi blọọgụ asọmpi megide ụlọ ọrụ mgbasa ozi buru ibu maka mgbasa ozi dollar. Mgbasa mgbasa ozi agbasawo oke mkpa, ọkachasị mgbe ndị etiti na-ata nri ha, ọ na-esiri niche na obere ndị nkwusa ike ịlanarị - ọbụlagodi mgbe ha nwere ike ịbụ nke ka mma, ezubere iche maka akara enyere.
Ka ha na-eji usoro mgbasa ozi na-agagharị n’ime usoro mgbasa ozi, ndị mbipụta ahapụla nnukwu uru ha nwere n’ọgụ a na-enweta maka inweta mgbasa ozi: nweere onwe ha zuru oke na ebe nrụọrụ weebụ ha na ngwa mgbasa ozi. Imirikiti ndị nkwusa enweghị ike ikwu n'eziokwu na enwere ihe ọ bụla gbasara azụmaahịa ha, ewezuga etu ndị na-ege ha ntị na ndị na-elekwasị anya na ya, na-eme ka ọ dị iche.
Ihe dị iche dị oke mkpa na azụmaahịa ọ bụla 'ga-aga nke ọma; ewezuga ya, ohere ịlanarị adịghị ike. Nke a hapụrụ ihe atọ dị mkpa maka ndị mbipụta akwụkwọ na ndị mgbasa ozi.
A Ga-enwe Nnukwu Mkpa Maka Saleszụ Ahịa - Ọ bụrụ na ụdị chọrọ ịnyefe mgbasa ozi dị elu n'ịntanetị, ha ga-arụ ọrụ ozugbo na onye mbipụta akwụkwọ. Onye mbipute nke ọ bụla nwere ikike ịkwado mkpọsa nke a na - enweghị ike ịzụ ahịa na websaịtị niile. Skins saịtị, pushdowns na ewere ọdịnaya bụ ụfọdụ n'ime ụzọ mara mma nke ugbu a na-ewere ọnọdụ, mana nnweta nhọrọ ga-agbasawanye n'afọ ndị na-abịanụ.
Ndị nkwusa savvy ga - ahụ ụzọ iji gbasaa onyinye okike - Ndị nkwusa mara ọkwa agaghị echere ụdị maka ịkọwa echiche maka mkpọsa nwere mmetụta dị elu. Ha ga-arụsi ọrụ ike na-echepụta echiche ọhụrụ, ha ga-ahụkwa ụzọ ha ga-esi rụọ ọrụ ha na ngwa mgbasa ozi na ọkwa ha. Ọnụahịa nke mkpọsa mkpọsa ndị a ga-abụrịrị na ọnụ ahịa dị oke ọnụ, mana na mgbakwunye na ROI ndị dị elu, ụgwọ nke ụdị mkpọsa a ga-emecha daa. N'ebe ọ bụla enwere ohere iji belata ọnụ ahịa na ahịa, onye na-eweta ọrụ na-akpaghasị ọrụ ga-emesị tinye aka.
Ndị nkwusa na ndị na-ere ahịa ga-achọta ụzọ iji wepụta Mgbasa Ozi Mmetụta Dị Elu Na Ahịa Dị ala - Ọ bụghị onye nkwusa ọ bụla ma ọ bụ akara ọ bụla nwere mmefu ego iji mepụta mkpọsa omenala. Mgbe ha mere, enwere ike ịdị elu na-atụghị anya ya na mmepe mmepe. Ka oge na-aga, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emepụta ihe ga-achọta ụzọ iji belata nsogbu ndị ahụ site na ịmepụta nhọrọ okike nke ndị nkwusa na ndị mgbasa ozi nwere ike ịzụta ma jiri ha wepụta ụdị mmetụta na arụmọrụ ha ga-esiri ike nweta ma ọ bụghị.
Inye Onwe-Onwe N'ihu Kpoo Adtech Bụ Nkọwa Na-efu
Ọnụ ọgụgụ dị elu, ROI, na mmetụta ika emetụtala n'ụzọ na-adịghị mma site nhazi na nnweta ngwaahịa chọrọ iji rụọ ọrụ mgbasa ozi n'ọtụtụ. Nke ahụ na-emeghe ohere ọhụụ nye ndị nkwusa na ndị na-ere ahịa iji nwetaghachi ihe okike na ihe ịga nke ọma nke ha nweburu.
Ndị na-akwado mgbasa ozi mgbasa ozi ga-arụ ụka na mgbasa ozi mmemme bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ihe magburu onwe ya nye ndị mbipụta akwụkwọ na ndị mgbasa ozi n'ihi na ọ na-ewetu ọnụahịa nke ire ere ahụ ma na-enyekwu ndị na-ebipụta akwụkwọ otu achịcha. Standkpụrụ bụ naanị ihe ndị a chọrọ iji rụọ ọrụ ahụ.
O doro anya na ndị nkwusa (ndị a ka kwụ akwụ), ga-ekwenye n'eziokwu. Ihe ịga nke ọma Adtech nwere bụ nke kachasị bụrụ mbipụta ya. Mana ọ bụ otu ndị mbipụta ahụ ka ha ga-ahụ ụzọ ha ga-esi lụsoo ọgụ site na ịtụgharị uche n'echiche ha maka ịre ahịa mgbasa ozi.
Tags: ad adMgbasa oziad mgbasa ozimgbasa ozindị mgbasa oziteknụzụ mgbasa oziIABmgbasa ozi mmemmeọkọlọtọ ad nhaọkọlọtọ ngosipụta mgbasa ozi nha